Bit By Bit - Ikusasa - 7.2.2 Umbambiqhaza kwesakhe iqoqo idatha
Ukuqoqwa izindlela zika esidlule, okuyizinto umcwaningi yiwona osenkabeni, ngeke ukusebenza njengoba kahle yobudala digital. Esikhathini esizayo, sizobe thatha ndlela umhlanganyeli-kwesakhe.
Uma ufuna ukuqoqa idatha eminyakeni yobudijithali, kudingeka uqaphele ukuthi uyaphikisana nesikhathi sabantu nokunakwa. Isikhathi nokunakwa kwabahlanganyeli bakho kubaluleke kakhulu kuwe; kuyinto eluhlaza yocwaningo lwakho. Ososayensi abaningi bezenhlalakahle bajwayele ukwakha ucwaningo kubantu abathintekayo, njengabafundi be-undergraduates kuma-campus labs. Kulezi zilungiselelo, izidingo zomcwaningi zibusa, futhi ukujabula kwabahlanganyeli akuyona into ebaluleke kakhulu. Ngocwaningo lwama-digital-age, le ndlela ayihlali kahle. Ababambiqhaza bavame ukuba kude kakhulu nabacwaningi, futhi ukuxhumana phakathi kwalababili kuvame ukuhanjiswa yikhompyutha. Lesi silungiselelo sisho ukuthi abacwaningi banokuncintisana ngokubamba iqhaza kwabahlanganyeli futhi ngakho-ke kumele benze ukuhlangenwe nakho okuthakazelisayo okuhlanganyela. Yingakho esahlukweni ngasinye esihilelekile ukuxhumana nabathintekayo, sibone izibonelo zezifundo ezithatha indlela yokubamba iqhaza ekuqoqweni kwedatha.
Ngokwesibonelo, esahlukweni sesi-3, sibone ukuthi uSharad Goel, Winter Mason noDuncan Watts (2010) badala umdlalo obizwa ngokuthi u-Friendsense okwakungumdwebo ohlakaniphile obhekene nohlolo lwesimo sengqondo. Esahlukweni 4, sibone ukuthi ungadala kanjani idatha ebiza ngezindleko ngokudala ukuhlolwa kwabantu abafuna ukuba khona, njengokuzama umculo (Salganik, Dodds, and Watts 2006) noPeter Dodds noDuncan Watts (Salganik, Dodds, and Watts 2006) . Ekugcineni, esahlukweni sesi-5, sibone ukuthi uKevin Schawinski, uChris Lintott kanye nethimba leGalaxy Zoo benza kanjani ukubambisana okukhulu okwakhuthaza abantu abangaphezu kuka-100 000 ukuba babambe iqhaza kwizinkanyezi (kuzo zombili izinzwa zelesi) umsebenzi wokubhalisa izithombe (Lintott et al. 2011) . Kuzo zonke lezi zimo, abacwaningi bagxile ekwenzeni okuhle kwabahlanganyeli, futhi esimeni ngasinye, le ndlela yokubamba iqhaza ihlinzeke izinhlobo ezintsha zocwaningo.
Ngilindele ukuthi esikhathini esizayo, abacwaningi bazoqhubeka nokuthuthukisa izindlela zokuqoqa idatha ezizama ukudala isipiliyoni esihle somsebenzisi. Khumbula ukuthi eminyakeni yobudijithali, abahlanganyeli bakho bayokuchofoza okukodwa ngaphandle kwevidiyo yenja ye-skateboarding.